ugweba kakuhle ngedolo abahlobo ndiye ungqengqe phezu kwinqanaba 29 marker Ndiza ukwenza umnxeba isigwebo bathi omnye yayo olukhohlisayo. Ngenjongo ukugawulwa 99% iibhloko kunye abarhola 16 000 iingongoma zingandihambeli engqondweni nokukhumbula kutheni oku waba yokumisa emhadini ethile ubude abaninzi kangaka.
Its Akunzima, yayo nzima frustratingly!
Kodwa Ukuba ndinako ukukwenza oko ukuze wena, umcimbi wayo nje yokucinga phambili kunye nokuhlanganisa ngemiphumo yezenzo zethu (wow ndivakala ngathi utitshala wam 10 webanga!)
Ukufumana ezabo kwi phantsi ekhohlo ukuya ekhona ephambili lakho lokuqala.
Okokuqala zonke bonke igqabhukile ibhaluni kwi kanye besekho ezabo libetha khetshi wire, bavuthele it up! oku kuya kukunika eminye kuqhubeke. Sebenza indlela yakho kunye ude ukwehlisa isitshixo nasemaweni itshixiwe phezulu, , ndimkhulule nabo kanye isitshixo ukhululekile. Zama kwaye ugcine neebhaloni esele, baya kuza kungekudala lokuposa. Xa uyivulile kumqolo zamatye kunye nomoya ke waya kaEtere ukuze uqale kokuphuma iibhaluni. Uya kuqaphela ukuba ivelise ibhaluni nga uyovula a khetshi ezimbalwa ngexesha, kodwa kuphela wakrwada iibhloko ezikufutshane, wena na ingxa- iibloko ngaphakathi khetshi kodwa abo ecaleni kulo! Musa ukuya osileyo wakube iwise screen ekuqaleni ngokwaneleyo ukuze ayichithe ivule khetshi ngezantsi, ukulondoloza njengoko uneebhaloni ezininzi kangangoko kunokwenzeka…zisoloko zibonakala ukuza kabi, kodwa ugcine loo screen ihamba phantsi.
Keys ukuvula izitena
Oku kwinqanaba apho zithuthwa zakho aphelela hit njalo, kodwa dont ukukhohlwa malunga babukele zakho, ukuzisebenzisa ngobulumko kwaye ukhumbule ukuba ungakwazi ukuqala abarhola omnye de kuqala yayihlelelwe off. Ukuba unayo enye ebhodini kunye iseti yonke phezulu zizifundo ezinkulu phambili mhlawumbi ubeke nje off nizihlahlele kancinane kakhulu. Khumbula isibuko ibihlaba zivuze xa kukho ehamba kunye neebhloko okanye ibhaluni bayiphathe it up.
Ukuba ukuqhushumba kwi emazantsi kungaba Ukugunda kakhulu!
Kukho izitshixo ngasezantsi kunye babukele ugqibelele ukuba sibakhulule. Gcina injongo yakho engqondweni xa uhamba, dont unokuzibona sele ezantsi kwekhusi kunye licorice zonke iintlobo ibhegi iibhloko ezinemibala okuseleyo nokucinga 'baphi na izilwanyana?’ Injongo wakho ukuba asuse 99% iibhloko ….DoH! Oku kuthetha ukuba unokuba kuphela 1 khohlo! Lwela ukugcina imibala kunye yaye ukuba ungagcina ukuqhushumba ngenxa emazantsi Inene ndithi kuni, oku kuya kuza lokuposa, ekugqibeleni uya uzakuphela kunye neebhloko ezimbini…yhe, akazange Ndikwachaza amacebo?